5 सामाजिक मिडिया को पासो — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
जेसिका Barefield अतिथि पोस्ट
मलाई एक त्याग दिएर सुरु गरौं. यस लेखमा दुष्ट सामाजिक मिडिया छ कसरी छैन. ठिक्क प्रयोग, सही हृदय मुद्रा संग, यो एक सुन्दर कुरा हुन सक्छ. यो लेखको बिन्दु सामाजिक मिडिया मसीही जीवन लागि एक pitfall हुन सक्छ र यो आफ्नो सामाजिक मिडिया खपत र सहभागिता आउँदा आफ्नो हृदय जाँच्न प्रोत्साहन गर्ने केही तरिकाहरू दर्शाउन छ. यी सामाजिक मिडिया हाम्रो पापी इच्छाहरू खुवाउन सक्छन् पाँच तरिका छन्.
1. सामाजिक मिडिया आफ्नो समय बर्बाद गर्न सक्छ
यो हामी अघि सुनेका छैन केही छ, तर यो दोहरो लायक छ. हामीले एफिसी मा सम्झाइन्छ 5:16-17 दिन दुष्ट छन् र हामी दिइएको समय को सबै भन्दा राम्रो उपयोग गर्नुपर्ने भनेर. एक पल को लागि विचार तपाईं गरिरहेको सक्छ के हुन सट्टा जाँच ती सबै साइटहरु. एक नियुक्ति मा प्रतीक्षा गर्दा, हामी हाम्रो फोनमा लागि प्रार्थना गर्न मानिसहरूको सूची राख्न र हाम्रो परिवार र साथीहरू लागि प्रार्थना ती अतिरिक्त मिनेट खर्च सक्छ. पक्कै पनि, एक समय वा अर्को मा, हामी सबै एक दिन मा Facebook मा घन्टा खर्च र कहिल्यै परमेश्वरको वचन अप शीर्षकमाथिको को दोषी छन्. हरेक क्षण देखि प्रभु देखि एक उपहार हो, यो आफैलाई सोधेर लायक छ, "त्यहाँ थप सार्थक म मेरो समय खर्च मा सक्छ भन्ने कुरा छ?" अधिकांश समय, जवाफ शायद हो.
2. सामाजिक मिडिया आफ्नो हरेक विचार एउटा मंच दिन्छ
म सामाजिक मिडियामा पोस्ट को एकता सोच धोखा गर्न सक्छन् यो सिर्फ केहि बारेमा पोस्ट ठीक छ. हामी गुनासो, हामी अज्ञात मान्छे Bash, हामी अख्तियार मानिसहरू अनादर, र हामी सेलिब्रेटीहरू सोच्न जे भन्न, तिनीहरूले वास्तविक मानिसहरू थिए भने. र हामी साँच्चै यो कुनै पनि लागि जवाफ छैन विश्वास. नगर्नुहोस् सही आफ्नो कोठा को गोपनीयता द्वारा झुक्काएका हुन अब-त्यहाँ केही निजी जीवित परमेश्वरको सामु हामी खडा गर्दा र हाम्रो शब्दहरू लागि खाता दिनेछु. मत्ती हामीलाई धेरै सीधै यस्तो चेतावनी दिन्छ, "न्यायको दिनमा, मानिसहरू बोल्न हरेक लापरवाह शब्द को लागि खाता दिनेछु। "हामी हाम्रो स्थिति अद्यावधिक यो चेतावनी अर्को समय को सम्झना गरौं.
3. सामाजिक मिडिया discontentment प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ
जब हामी अरूलाई गरिरहेको र भनिरहेका छन् के भन्दा घनघोर विस्तारित समय खर्च, यसलाई हामी छैन वा बाहिर हराइरहेका छन् सबै कुराहरू हाम्रो ध्यान ड्र. यो हाम्रो जीवन नै हेर्न छैन प्रश्न गर्न हामीलाई सक्छ. म बोली किन थिएन? म शैली को उनको अर्थमा थियो इच्छा. आफ्नो नयाँ घर हाम्रो भन्दा तरिका ठूलो छ! हामी होसियार भएनौं भने, फेसबुक वा Pinterest मा तीस मिनेट तपाईं अनुपजाऊ महसुस पार्नसक्छन्, आकर्षक, र आफ्नो जीवनको underwhelmed. हिब्रू हामीलाई यस्तो सल्लाह दिन्छ, "आफ्नो जीवन पैसाको प्रेम मुक्त राख्नुहोस्, र तपाईं के सन्तुष्ट हुन, लागि उहाँले भन्नुभयो छ, हामी ख्रीष्टमा आवश्यक सबै कि दिइएको किनभने 'म कहिल्यै तिमीलाई छोड न त त्याग्नु।' "हामी अन्ततः विश्वासीहरूलाई रूपमा हाम्रो जीवनमा सन्तुष्ट हुन सक्छ. तपाईं यो सत्य विश्वास सामाजिक मिडिया को प्रयोग मदत गरिरहेको छ कि छैन भनेर आफैलाई सोध्नुहोस्.
4. सामाजिक मिडिया गर्व प्रोत्साहित र तपाईं inwardly केन्द्रित राख्न सक्नुहुन्छ
सामाजिक मिडिया चाँडै आत्म-पदोन्नति लागि हाम्रो आफ्नै पोडियम बन्न सक्छ. हामी हाम्रो प्रेरणा हामीले भन्ने कुरा पोस्ट लागि साँच्चै आफैलाई यस्तो प्रश्न सोध्नु छ. हामी सहानुभूति वा प्रशंसाको लागि देख रहे? हामी को राम्रो लाग्यो वा हामी गरिरहेको छु रमाइलो कुरा घमन्ड गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं लगातार आफ्नो पोस्ट पायो कति "लाइक" वा "retweets" जाँच गर्छन्? यी कुराहरू सबै गर्व प्रोत्साहित र हामीलाई केन्द्रित राख्न. यो आफ्नो मित्र र परिवारका परे विस्तार गर्ने एक मंच छ जो कसैको लागि विशेष कडा pitfall हुन सक्छ. चाहे तपाईं संगीत के वा लोकप्रिय ब्लग छ, हजारौं मनमा आउँछ भन्ने सबै होइन सुनिरहेका छन् बस किनभने यसो लायक छ. हामी retweets सम्झना गर्नुपर्छ, टिप्पणी, र लाइक स्वतः हामी पोस्ट के वैधता दिन छैन. परमेश्वरले हाम्रो हृदय प्रेरणा देख्नुहुन्छ र राम्ररी तैयार पोस्ट द्वारा झुक्काएका कहिल्यै छ. म शमूएल रूपमा 2:3 होस, "त्यसैले गर्व कुरा नराख्नुहोस् वा आफ्नो मुख यस्तो अहङ्कारको कुरा गरौं, प्रभु लागि थाह छ र उहाँलाई कामहरू वजन भएका परमेश्वर हुनुहुन्छ। "
5. सामाजिक मिडिया सम्बन्ध हाम्रो दृश्य विकृत गर्न सक्नुहुन्छ
हरेक सामाजिक मिडिया लाभ उठाउन लागि सम्बन्ध लागि छ, त्यहाँ एक फिर्ती को दावा हो. यो तपाईं प्रेम हुनेहरूको साथ राख्न सजिलो छ (शायद धेरै सजिलो?). तपाईं अझै पनि गहिरो छन्, व्यक्तिमा अर्थपूर्ण कुराकानी? यो मान्छे को धेरै तपाईं प्रेम-र मान्छे को धेरै तपाईं पनि थाहा छैन राख्न सजिलो छ (शायद धेरै?). तपाईं को विवरण oversaturated छन् 300 तपाईं राम्रो काम मायालु को छैन गरिरहनुभएको छ कि मानिसहरूको जीवन 10 तपाईं हप्ताको हप्ता हेर्न मान्छे? हामी आफूलाई जानकारी को उपभोक्ताहरु सट्टा मान्छे प्रेमीहरूलाई हुन चाँडै प्रशिक्षण दिन सक्छौं. कसैको जीवनको बारेमा जान्नु र सामाजिक मिडिया मार्फत आफ्नो आफ्नै जीवनको बारेमा सबै कुरा साझा एक वास्तविक मित्र रूपमा नै छ. पक्कै येशूले यो एक साँचो मित्र हुन अर्थ सिद्ध उदाहरण हो. येशू सिकाउँछ, "मेरो आदेश यो छ: म तपाईंलाई प्रेम छ एकअर्कालाई प्रेम. ठूलो प्रेम यो भन्दा कुनै एक छ, मैत्री स्थिति अद्यावधिक र तस्वीर योगफल भन्दा बढी छ आफ्ना मित्रहरू लागि आफ्नो जीवन राख्नु भनेर। ". मित्रता बलिदान छ. यो प्रत्येक अन्य गरेको बोझ बोकेका गर्नुपर्छ. यो केवल छैन भर्चुअल-यो मूर्त हुनुपर्छ.
जेसिका Barefield वाशिंगटन D.C बसोबास. पतिको यात्रा संग, र आफ्नो छोरा क्यू. तपाईं आफ्नो ब्लग मा उनको बढी पढ्न सक्नुहुन्छ, प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ.
जेवियर्स • सेप्टेम्बर 24, 2013 मा 12:18 बजे • जवाफ
यो त सत्य हो. म खुल्लमखुल्ला म सामाजिक मिडियामा घन्टा र मेरो समय को घन्टा र दिन बर्बाद कि स्विकार गर्नेछ र सबै अंक अगाडि ल्याए, म सीधा बताउन सक्नुहुन्छ. म गर्न चाहन्छु र यसलाई कटौती गर्न भनेर मेरो मन र हृदय जान्न, वा निकै बढ्छ, तर यो सजिलो छ. तर तपाईं प्रवाह गरेको सन्देश र अझ गर्न प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरको शब्दहरू यस स्पष्ट मलाई बोल्न. यो लेख को लागि धन्यवाद :)
असले • सेप्टेम्बर 24, 2013 मा 12:19 बजे • जवाफ
ठूलो पोस्ट! साँच्चै मलाई लाग्छ र मेरो सामाजिक मिडिया प्रयोग विचार गरे!
Tyron • सेप्टेम्बर 24, 2013 मा 12:21 बजे • जवाफ
धेरै राम्रो पढ्ने! थियो कहिल्यै सामाजिक सञ्जाल र एक वर्ष अघि एक सानो सम्म संलग्न यी कारण केही हो. म वास्तवमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ के ध्यान केन्द्रित गर्न मेरो सामाजिक सञ्जाल मेटाउने बारे सोच छ. यहाँ राम्रो अंक धेरै. यो लेख्न र साझेदारी गर्न आफ्नो समय लिनका लागि धन्यवाद.
daniela • सेप्टेम्बर 24, 2013 मा 12:27 बजे • जवाफ
वाह! त्यसैले साँचो. म निश्चित मेरो सामाजिक मिडिया सेवन काम गर्न आवश्यक छ. यो धेरै धेरै कारण मध्ये एक खपत गर्नुपर्छ म Pinterest मा रही रोकियो. साझा लागि धन्यवाद.
जे • सेप्टेम्बर 24, 2013 मा 12:51 बजे • जवाफ
केही अनमोल छोटो
स्टेसी • सेप्टेम्बर 24, 2013 मा 12:57 बजे • जवाफ
यो पोस्ट को लागि धेरै धन्यवाद. म फेसबुकमा प्राप्त बारेमा आफैलाई संग लडिरहेका छन्. देखिन्छ हाल सबै यसले गर्छ पागल क्रोधित बनाउन छ. यो म सुन्न आवश्यक र जब म सम्झाउन आवश्यक reread हुनेछ सबै थियो. तपाईं र यात्रा धन्यवाद. परमेश्वरको आशिष् दिनुहुन्छ.
Mishael • सेप्टेम्बर 24, 2013 मा 1:20 बजे • जवाफ
Eulaivi Clutario • सेप्टेम्बर 24, 2013 मा 1:30 बजे • जवाफ
तपाईं एउटा प्रेरणा हो! यति धेरै राम्रो अंक तपाईं यहाँ. बुझ्ने र हाम्रो पुस्ता धेरै सान्दर्भिक भन्ने आफ्नो बुद्धिको लागि परमेश्वरको प्रशंसा! :)
तपाईं • सेप्टेम्बर 24, 2013 मा 1:48 बजे • जवाफ
म यो शक्तिशाली साझेदारी द्वारा हृदय कटौती गरिएको छ. म हामी सबै यस क्षेत्रमा फेला चाहने छन् विश्वास. धन्यवाद यात्रा र जेसिका. परमेश्वरले तपाईंलाई प्रयोग गर्न सक्छ .
कालेबले • सेप्टेम्बर 24, 2013 मा 2:15 बजे • जवाफ
राम्ररी भनिएको! म सामाजिक मिडिया बारे यी नै विचार केही पछिल्लो शुल्क वर्ष थियो गर्नुभएको. लेखन राख्न!
बाटो • सेप्टेम्बर 24, 2013 मा 4:56 बजे • जवाफ
मलाई यो मन पर्यो!!!! त्यसैले त साँचो र म इच्छा थप मानिसहरूलाई यी बुँदाहरू बुझे!
Themba • सेप्टेम्बर 25, 2013 मा 5:49 छु • जवाफ
के तपाईं साँच्चै यो पुस्ता गर्न प्रेरणा हुनुहुन्छ. राम्ररी भनिएको!!!
क्लारा • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 4:27 छु • जवाफ
त्यसैले साँचो र विश्वस्तता दिइएको हो कि यी शब्दहरू लागि धेरै जेसिका धन्यवाद. परमेश्वरले तपाईंलाई र घरेलू प्रयोग गर्न सक्छ :-)
एंजेला • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 5:27 बजे • जवाफ
यो enlightening पोस्ट लागि धन्यवाद! यो हामी र अरूलाई र आत्म मा कम येशूले हाम्रो आँखा समाधान गर्न शीघ्र गर्नुपर्छ.
जेम्स • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 5:27 बजे • जवाफ
अति उत्तम…. परमेश्वरको महिमा एक्लै….
मार्क • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 5:36 बजे • जवाफ
तिमीलाई धेरै धन्यवाद, लागि “सानो मान्छे” आवाज बाहिर यसलाई संख्या सोच्न बोल्छ हाम्रो “सामाजिक” मूल्य सामाजिक मिडिया बाट लिइएको हो. को वेक अप कल लागि धन्यवाद !
जिमी McCrary • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 5:38 बजे • जवाफ
Oyishoma ईम्यानुएल • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 5:40 बजे • जवाफ
त्यो त सत्य हो. हामी उद्देश्य बिना सामाजिक सञ्जाल बहुमूल्य समय बर्बाद, र जब उद्देश्य जमीन छ, दुरुपयोग अपरिहार्य छ. म म कहिलेकाहीं यो दोषी छु; तर म मेरो प्राथमिकता पुनर्निर्देशित गर्न अनुग्रह लागि प्रार्थना.
ADIN मूर • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 5:44 बजे • जवाफ
यो एक राम्रो पोस्ट छ. हामीलाई यो साझेदारी लागि धन्यवाद, यो पढेर आनन्द र यसलाई सामाजिक मिडिया को पासो मेरो आँखा खोल्ने. :) अनुग्रह & शान्ति.
यूसुफ • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 6:03 बजे • जवाफ
ठ्याक्कै किन म स्थायी रूपमा प्रारम्भिक मेरो Fakebook मेटिएको 2012. बस कसरी म मा केबल दिनुभयो मन 2001, म Fakebook वा टिभी या त सम्झना छैन. प्लान आफैलाई प्रेम गर्न सजिलो बनाउँछ, जो मूर्तिपूजा हो. कामको लागि कम्प्युटर मा रहेको (भिडियो सम्पादन) म मेरो निःशुल्क समय मा यो समय खर्च गर्न चाहनुहुन्छ किन सबै थप कारण छ, तर यो कम्प्युटरमा समय बर्बाद गर्न त सजिलो छ. यदि म YouTube मा छु, यसलाई अन्य मसीहीहरूको edifying भिडियो हेर्न हो. म अत्यधिक हरेक मसीही यो लेख पढ्न सिफारिस: “फेसबुक हाम्रो प्राण गठन” शेन Hipps द्वारा (दोस्रो प्रकृति जर्नल com थोप्लो)
Leticia • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 6:25 बजे • जवाफ
धेरै प्रोभोकिंग लाग्यो!
ठीक • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 6:41 बजे • जवाफ
वाह, ठूलो पोस्ट, म साँच्चै अनमोल छु.
बारबरा • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 6:56 बजे • जवाफ
हे भगवान् म त तपाईं भने ठ्याक्कै द्वारा गत हप्ता दोषी थियो …फेसबुकमा खर्च घण्टा शब्द मा खर्च पर्छ भनेर! म यो ब्लग प्रेम…ज्ञान आउँदै राख्न!
प्रिस्किला • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 6:58 बजे • जवाफ
म आफ्नो सन्तुलित स्थिति चाहनुहुन्छ; पूर्ण सामाजिक मिडिया condemning छैन, अझै मुद्दा बाहिर देखाउने / पापले लागि झुकाव. iLove मलाई सम्झना दिलाउँछ.
Roshell • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 7:05 बजे • जवाफ
साझेदारीको लागि राम्रो points..thanks म यसलाई आवश्यक .
क्रिस्टिनले • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 8:16 बजे • जवाफ
साझा लागि धन्यवाद! यो सामाजिक मिडिया आउँदा हामीले सावधानी गर्नुपर्छ कसरी उत्कृष्ट रिमाइन्डर.
सुजन • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 8:29 बजे • जवाफ
यस लेखमा लागि जेसिका धन्यवाद & तपाईं म यसलाई देख्न सक्थे त FB मा पोस्ट लागि यात्रा धन्यवाद & यसलाई पढ्न ब्लग आउन.
Liz • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 8:41 बजे • जवाफ
ठूलो लेख्ने माथि! निश्चित लागि सोच प्रोभोकिंग…नोट!
Christa • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 8:56 बजे • जवाफ
वाह! यो अचम्मको छ! हरेक बिन्दु मलाई मारा र म साँच्चै सुन्न आवश्यक. तिमीलाई धेरै धन्यवाद. परमेश्वरको आशिष!
गुलाबी • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 9:23 बजे • जवाफ
यो लेखन को लागि धेरै धन्यवाद. यो यति धेरै Insightful छ र मैले सामाजिक मिडिया मेरो समय सीमा गर्न आवश्यक छ कि चिनन मा धेरै मदत गरेको छ. तपाईं वर्णन गर्नुभएको कुराहरू धेरै म बताउन सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू छन्. सामाजिक मिडियामा धेरै समय खर्च तपाईंको ब्लग साँच्चै मेरो लागि शब्दमा यसलाई राख्नु छ मेरो आत्मा को लागि लाभदायक छ. फेरि धन्यवाद यति
LAURIE • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 10:41 बजे • जवाफ
नम्बर ठाउँ मै4मेरो लागि. हेर्न एक – धन्यवाद
Terrell • सेप्टेम्बर 26, 2013 मा 11:09 बजे • जवाफ
यो लेख लेखन को लागि धन्यवाद; यस लेखमा edifying थियो.
Clement Magombo • सेप्टेम्बर 27, 2013 मा 2:25 छु • जवाफ
परमेश्वरले तपाईंलाई यो साझेदारी आशीर्वाद. म जे म के अनलाइन / अफलाइन शुद्ध र विचारशील हुनु आवश्यक छ. अनुग्रह र शान्ति
देखि • सेप्टेम्बर 27, 2013 मा 3:31 छु • जवाफ
उत्कृष्ट लेख! राम्रो जोडा र सन्तुलित. बाडेको मा धन्यवाद
Elton • सेप्टेम्बर 27, 2013 मा 6:18 छु • जवाफ
दोषी रूपमा सबै मा चार्ज5अंक…यस को लागि धन्यवाद.
आदम • सेप्टेम्बर 27, 2013 मा 7:35 छु • जवाफ
मेरो काम अनलाइन छ र यो एउटा ठूलो भाग सामाजिक मिडिया छ किनभने यो लेख मेरो आँखा द्रुत समातिए. यो मेरो काम थियो अघि म पूर्ण यस सम्बन्धित सक्छ. यदि कुनै आत्म नियन्त्रण छ यो साँच्चै एक समय नुकसान हुन सक्छ. यो निश्चित लागि सावधानीपूर्वक नजिक केहि हुनुपर्छ!
Naisha • सेप्टेम्बर 27, 2013 मा 9:32 छु • जवाफ
म यो मेरो ठहराउन थियो थाह थियो किनभने म मेरो फेसबुकमा यो लिंक देखे र यो पढ्न dreading थियो र आज म भने, “ठिक छ… मलाई यो गरौं।” lol. बस सबै बारे यहाँ म अनलाइन मेरो समय खर्च कसरी साँचो छ र म यो लेख लेखे गर्ने व्यक्ति केही तरिकामा आफु यो पोस्ट छैन भनेर छन् भने त्यो यो संघर्ष गरेका थिए मान गर्न जाँदैछु. त्यसैले यसलाई त्यहाँ बोक्न वा एउटै बोझ बोक्न गर्नुभयो अरू मानिसहरू हुन् भनेर थाह राम्रो छ. चर्च मा तपाईं यो जस्तै सामान स्वीकार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ गर्छन, किनभने हामी विचार सिर्जना गरेका अरू कुनै एक संग संघर्ष कि. बस अन्य दिन म मेरो श्रीमान् कुरा र उहाँलाई बताइरहेका थिए म मेरो आइपड केही अनुप्रयोगहरू मेटिएको कसरी (हो म अझै पनि एक आइपड र आइफोन छ, विकल्प द्वारा) किनभने यो अस्वस्थ / अभक्त सोचाइ सिर्जना. म जहाँ तपाईं घर आफ्नो सपना सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र बारी मा म हामी बस्ने घर संग यति निराश थियो घर डिजाइन खेल्न प्रयोग. म अझै पनि प्लान मा मल विश्व प्ले र मेरो श्रीमान् म यसलाई मन कि स्वीकार मन मेरो अवतार हुन्छ किनभने म हुँ, उनी राम्री छिन, कलिलो, Indépendant र यसलाई म मार्फत जीवित आनन्द भनेर कल्पना. शायद म अजीब आवाज वा मान्छे म धेरै साझेदारी लाग्छ सक्छ तर यो मेरो आफ्नै दृढ विश्वास हो. हामीलाई लेखक र अन्य टिप्पणीकारहरू साथमा आफ्नै विश्वस्तता साझेदारी गरेर reinforcing के म को लागि धन्यवाद.
ChinaJohnson • सेप्टेम्बर 27, 2013 मा 11:44 छु • जवाफ
म एक समय को लागि मेरो फेसबुक र इन्स्टाग्राम मेटाउने गरिनेछ. यो मेरो वेक अप कल थियो. मेरो श्रीमान् मलाई यो बारेमा बताउन गरिएको छ र discontentment धेरै टाढा गएको छ! तपाईं जेसिका धन्यवाद!
हारून • सेप्टेम्बर 27, 2013 मा 1:04 बजे • जवाफ
lol यो त सत्य हो।. भाग्यवस, म बारेमा मेरो सामाजिक सञ्जाल खाता हटाइएको गर्नुभएको3धेरै अगाडी :डी
रिचर्ड • सेप्टेम्बर 27, 2013 मा 1:46 बजे • जवाफ
josue • सेप्टेम्बर 27, 2013 मा 9:59 बजे • जवाफ
त्यो वास्तविक छ! मलाई thinkin पायो!
आरजे • सेप्टेम्बर 30, 2013 मा 6:21 छु • जवाफ
धन्यवाद! म gonna छु फेसबुक बाट एक हप्ता लामो ब्रेक लिन, इमेल, र इन्स्टाग्राम र काम म मेरो दैनिक जीवनमा हेर्न मान्छे संग छ ती सम्बन्ध मा.
टायलर • सेप्टेम्बर 30, 2013 मा 7:21 छु • जवाफ
उत्कृष्ट सामान! म एक उच्च विद्यालय विद्यार्थी र retweets मा धेरै स्टक राख्दै बारेमा भाग छु र यति सत्य हो मनपर्यो! म निश्चित आफ्नो ट्विटर / फेसबुक बाहिर आउन सक्नुहुन्छ कि केही राम्रो कुरा हो तर यो जहाँ तपाईं हृदय बारेमा सबै छ लाग्छ!
THOMASSINGWA • अक्टोबर 3, 2013 मा 12:51 छु • जवाफ
वाह मेरो लागि लेखिएको थियो कि परमेश्वरलाई धन्यवाद,जीवन दिनेलाई सधैं आशीर्वाद सक्छ तपाईं र तपाईंको family.Trip सधैं संगीत दिन को मानिस छ,writtens आदि मलाई awake.we लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद राख्छ
घाम • अक्टोबर 3, 2013 मा 11:17 बजे • जवाफ
फेसबुक मुक्त शुक्रवारका?! म संग आउनुहोस! :पी अक्टोबर सम्पूर्ण महिना!
उल्लेख: Lupe को प्रेम को लागि
मिरांडा • अक्टोबर 8, 2013 मा 1:38 छु • जवाफ
साँच्चै राम्रो पोस्ट! सामाजिक मिडिया अलि धेरै हुन सक्छ तर म प्राण पुग्न हेर्न गर्दा र तिनीहरूले आफ्नो परिवारको एक चर्च मा रोपे र चर्च मा र परिवार आफ्नो समुदायमा सेवा गरिरहेका छन्।. कि मलाई अचम्मको छ.
Keinya • अक्टोबर 18, 2013 मा 5:11 छु • जवाफ
वाह. यो वास्तवमा मलाई बोल्नुभयो र म यसको सराहना. यो त राम्रो जोडा र प्रतिबिम्बित गर्ने उपायहरू केही ठूलो सल्लाह छ गर्नुपर्छ. धन्यवाद!
Marjorie • अक्टोबर 21, 2013 मा 7:15 बजे • जवाफ
यो पोस्ट को लागि धन्यवाद! म पक्कै यो पढ्न आवश्यक छ किनभने म त खुशी परमेश्वरले तपाईंको ब्लगमा मलाई नेतृत्व आज छु!
Jerdon • अक्टोबर 31, 2013 मा 2:03 बजे • जवाफ
म यो ब्लग आउने र यात्रा र पत्नी यी भयानक पोस्ट को सबै पढेर मन. दुई असल काम राख्न अप!!! परमेश्वरको आशिष.
pelumi • नोभेम्बर 3, 2013 मा 9:47 बजे • जवाफ
यो सिर्फ मलाई मैले सोचें कि म थियो थप सूक्ष्म दिनुभयो
यात्रा र तिनको परिवार शुद्ध आशिष् हो.
TheMesenger • नोभेम्बर 8, 2013 मा 8:54 छु • जवाफ
कहिलेकाहीं हुन्छ छैन यसले गर्छ ????
TheMesenger • नोभेम्बर 8, 2013 मा 8:51 छु • जवाफ
त्यो पनि समय छ जस्तो हुनेछ यो भगवान टाढा समय लाग्न सक्छ sooooo साँचो हो4उहाँलाई हामी समय बन्द यसलाई कटौती छौँ
कार्ड • नोभेम्बर 17, 2013 मा 12:05 छु • जवाफ
उत्कृष्ट पढ्ने. admittedly, म राम्री केटाहरू र राम्रो कुरा मा देख र म तर्फ परमेश्वरको धक्का गर्छन सबै यी बाहिरको tumblr मा कुराहरू द्वारा समात्नु रही धेरै समय खर्च. यो दुखद छ, दुःखी कुरा; म उहाँको वचन मा पढ्दा र उहाँलाई संग बढी समय खर्च गर्न सकिएन….आँखा ओपनर लागि धन्यवाद!
दान • डिसेम्बर 28, 2013 मा 5:57 बजे • जवाफ
वाह. म भर्खर दुई नेटवर्क थियो किनभने म राम्रो गरिरहेको थियो लाग्यो. यो निश्चित मलाई आफैलाई जाँच मदत. म पाप छैन किनभने थियो म ठीक थियो लाग्यो, र पाठ्यक्रम त्यहाँ सधैं सुधार को लागि कोठा हो.
बाट लुकाउन • जनवरी 30, 2014 मा 10:29 छु • जवाफ
परमेश्वरले तपाईंलाई यो साझेदारी आशीर्वाद र धन्यवाद! यो पोस्ट बस मलाई समय सोचिरहेका म सामाजिक मिडिया र यसको सञ्जाल संग बर्बाद भयो. यो मलाई पुन: विचार गर्न म समय संग के छु मदत गरेको छ.
कृपा • फेब्रुअरी 17, 2014 मा 3:56 बजे • जवाफ
म हरेक बिन्दु सहमत. किनभने म त्यहाँ अन्य बालिका मेरो आत्म तुलना फेला निश्चित लागि म इन्स्टाग्राम परहेज गरिएको छ. यो गुन नमान्ने महसुस गर्न राम्रो होइन. म प्यारा पशुहरू देख मनपर्छ. lol
म मेरो प्लान मेटाउने छलफल, इन्स्टाग्राम धेरै पटक खाताहरू. म यसलाई टाढा अलग हुनत परिवारका सदस्यहरूले साथ राख्नको लागि राम्रो लाग्छ. :)
घर सजावट • मार्च 5, 2017 मा 3:30 छु • जवाफ
उत्कृष्ट ब्लग! तपाईं लेखकहरूले इच्छुक लागि कुनै पनि सुझाव र आशय छन्?
म चाँडै मेरो आफ्नै वेबसाइट सुरु गर्न योजना छु तर म सबै कुरा मा एक सानो हराएको छु.
तपाईं WordPress जस्तै निःशुल्क मंच सुरु हुने प्रस्तावित वा सशुल्क विकल्प लागि जाने? यति धेरै विकल्पहरू बाहिर त्यहाँ म पूर्ण अभिभूत छु भनेर छन् ..
कुनै पनि विचार? धन्यवाद!